I-Semalt ichaza iindlela ezenzileyo zokuphelisa iTrojan-Dropper.Win32.ZomJoiner.241
iTrojan-Dropper.Win32.ZomJoiner.241 yingozi yokuhlaselwa kweTrojan eye yafunyanwaukuba yingozi kuzo zonke iikhomputha kwihlabathi. Le ntsholongwane isasazeka ngewebhu kwaye izenzele ngokuzenzekelayo kwikhomputha ngexesha lootitshalaimisebenzi kwi-intanethi enjengokuvula i-imeyili engaziwayo, ukujonga iphepha lokuzihlambalazi nokukhuphela i-freeware. ITrojan, kanyeifakwe, ichaphazela ikhomputha yomphathi ngokuphazamisa ukungena kunye neefayile zenkqubo kunye nokwenza ezintsha ukuba zenze izinto ezimbiukudideka kwisakhiwo. Ngethuba lokungena, iTrojanisi ixhaphaza iinkqubo eziphuma ukukhupha iikhowudi ezininzi ezinobungozi ezifanai-malware, iimbongolo, i-spyware kunye ne-adware kwikhompyutha - portland pc support.
Ihhashi leTrojan lichaphazela ikhomputha ngokunciphisa ukusebenza kwenkqubokwaye kubangele uxhumano olunzulu lwentlalo. Ekugqibeleni, ikhomputha yekhomputha iyakhokelela ekukhutsheni ngokukhawuleza ngexesha lokuvala, ukuqalisa kunye nenkquboukuqaliswa kwenkqubo enkulu. Ngoko ke, kuyimfuneko yokuba abasebenzisi bekhomputha bawususe iTrojan-Dropper.Win32.ZomJoiner.241 viruskwi-PC yabo ngokukhawuleza xa ifunyenwe. Ukuze uphumelele ekwenzeni oku, hlala phantsi kwiingcebiso ezichazwe nguYulia Vashneva, okhokelayongcali iSemalt .
Iiprogram ze-antivirus ezihlukumelayo zihlulwe ngokweenzame zabo zokubonakalisa ezisemthethweni kunyenjengokuba kunokwenzeka, kodwa xa sele bekhompyutheni yakho, imiba eyahlukeneyo kunye neengxaki zenzeka kwaye inokutshabalalisa inkqubo yakho. Ayiyokucebise ukuthenga 'ukuphucula' intsholongwane kuba abahlaseli basebenzise oku kufumaneka ulwazi lwekhadi lesikweletu kwaye bavule i-akhawunti yebhanki.
Indlela yokususa iTrojan-Dropper.Win32.ZomJoiner.241
Ukuze ususe le ntsho longwane, kuya kufuneka uhlambulule ngesandlaukususa zonke iifayile ezinxulumene nentsholongwane okanye ngokusebenzisa isofthiwe yokususwa ngokuzenzekelayo. Abaqalayo abavunyelwanga ukuzama ukususwa kwencwadana ukuba ngabaiquka ukuhlelwa kwerejistri enobumba yekhompyutha. Kufuneka ukuba ususe ngokuthe ngileyo iimpawu zobhaliso ezinxulumene neTrojanintsholongwane, yeka imisebenzi yokusebenza, ukususa iifayile ezonakalisiweyo ze-LNK kunye neDDL, kwaye ekugqibeleni ususe zonke iifayile kunye neefolda ezidibeneyointsholongwane. Iphutha kule nkqubo yencwadana inokukubiza kakhulu ukulungisa i-PC engasebenzi. Yingakho isofthiwe yokususwa ngokuzenzekelayo kunyekhetha ezimbalwa izixhobo zokususa zibalulekileyo kwaye zinconywa kubaninzi kuba igcina ixesha nemali njengoko ikhompyutha iya kusebenza kwakhona.
Amanyathelo okususa amanqaku
Ngezinye iinkqubo inkqubo yokhuseleko efakwe kwikhompyutheni ingahle ihluleke ukulahlaITransfer-Dropper.Win32.ZomJoiner.241 intsholongwane. Kule meko, amanqanaba alandelayo angasetyenziswa.
1. Sebenzisa umphathi we-Windows Task ukuqeda iinkqubo ezihambelanayo.
2. Susa amagugu okubhalisa i-virus ebhalisiweyo usebenzisa umhleli weRejista.
3. Ungayibhalisi iTrojan-Dropper.Win42.ZomJoiner.241 iifayile zeDDL usebenzisa i-Windows command prompt.
4. Khangela kwaye ususe ezinye iifayile ezikhuselwe.
Qaphela: Le ntsholongwane yeTrojan ineenkqubo eziliqela ezisebenza kwimvelaphi ye-PCkwaye ezininzi iifayile, ngoko, ukususa iTrojan-Dropper.Win32.ZomJoiner.241 ngokupheleleyo, kufuneka zonke zisuswe enye intsholongwane iya kufakakwakhona ngokuzenzekelayo. Kucetyiswa ukuba usebenze kwimodi ekhuselekileyo ngenkqu ngokukhipha ngesandla igciwane leTrojan ukugcina amagugu obhaliso obalulekileyo.
Ngamafutshane, intsholongwane yeTrojan ingonakalisa ikhompyutha kwizinga lokukhuphela ezinyeiintlobo zeentsholongwane njenge-hijack yokurhoxiswa kwenkqubo kunye neprogram. Amanye amaxhoba angabandezeleka ngokuhlaselwa okufanayo. Iyakwazi ukuvumela i-backdoorukufikelela kumaxhoba ngenxa yezizathu ezimbi. Ukukhishwa kwincwadi yeTrojan-Dropper.Win32.ZomJoiner.241 inconywa ukuba ibalekeleiingxaki kuba i-antivirus ayikwazi ukujongisa kakuhle imeko.